:Bọchị: Disemba 1, 2019
Usoro Mbido Tarsus Mersin na Ahịa Tiketi: Adana bụ ụzọ ụgbọ oloko kacha eji eme n’etiti Mersin na Mersin State Railways. Oge njem Ọ na-ewe ihe dị ka nkeji iri anọ na ise. Adana n’oge ọkọchị na udu mmiri [More ...]
Emere ka Kayseri Erciyes mata ndị ọkachamara na njem nlegharị anya na Thailand, nke ekpebisiri ike dị ka ahịa n'etiti oke atụmatụ njem na usoro nkwalite ọhụụ. Nzukọ nkwalite Kayseri-Erciyes na-eme na Bangkok, isi obodo Thailand site na ebumnuche nke Airlineslọ Ọrụ Turkish Airlines Kayseri, [More ...]
nke nwere NATO nke abụọ kasị ukwuu okpuru mmiri nsoro Turkey, ndị Turkish Navy si National okpuru mmiri na mpaghara mba onwunwe ma ga-emepụta (si aro) Project eze malitere. Projectdị Submarine Ọhụrụ [More ...]
Ihe “4. Kamuran Yazıcı, onye isi njikwa nke TCDD Taşımacılık AŞ, kwuru okwu na “ationgbọ njem na Ndepụta Ngwaahịa” n'ime Mgbakọ Mba Nile Ndị Na-ahụ Maka Ọrịa International silk. [More ...]
E wuru àkwà mmiri dị nchebe n'ime ime obodo Balıkesir; Ndi mmiri Balıkesir Metropolitan bibiri obodo Hungıa-Karamanlar na Nusret-Kepsut, nke dikwa nnukwu ihe egwu, ma emere ha ozo dika uzo nchebe na uzo abuo. Mepee okporo ụzọ [More ...]
Nnọkọ ihe omumu ihe omumu nke ala nke International Metropolitan nke Istanbul haziri iji mee ka Istanbul bụrụ obodo nwere ike ibute ọdachi ga-amalite echi. Onye isi obodo Obodo isi obodo Istanbul Ekrem İmamoğlu ga-eme mmeghe mmeghe na ogbako omumu ihe a. [More ...]
A na-akwadoro akụkọ nyocha nke Mmetụta gburugburu ebe obibi (EIA) na Nzukọ Nyocha na Nyocha (CEC) nke Kanal Istanbul Project na Ankara. TEMA Foundation sonyere na nzukọ IAC ebe a na-enyocha akụkọ EIA ma nwee njikọ na Kanal Istanbul Project [More ...]
Epeepe Yazıyaka na Türkbeyli Agbataala jikọtara isi okwu maka owuwu nke Mịnịsta na-achọghị ka ndị ọrụ obodo Maazị Turhan Bulut, na ndị otu Mgbakọ Mgbakọ na ụmụ amaala mgbe ekpere Fraịde gasịrị. [More ...]
Onye ọchụnta ego Sukru Fettahoglu, ọrụ ụgbọ ala Uzungol eriri ejigide ruo ogologo oge. Fettehoğlu bidoro ọrụ olulu ahụ, kwuru na oghere nke osisi ahụ mepere. Fettahoğlu, "Ka uche Chukwu, abụọ n'ime ọdụ atọ ahụ ga-emeghe na July." [More ...]
EIA adịghị mkpa maka Kadıköy Sultanbeyli Metro Mwube Amalite; Ntụle Mmetụta gburugburu obibi (EIA) chọrọ maka Kadịnal Kadịnk-Sultanbeyli nke ogologo ogologo 18.4, nke ọrụ nke Obodo Metropolitan Municipal (IMM) bụ nke edoziri ya. [More ...]
Ngwa X-ray, nke a na-agaghị agọnarị n'ụzọ mbata ụzọ ụgbọ oloko dị na Ankara, arụ ọrụ kemgbe izu gara aga. N'ime oge elekere kachasi anya nke ndị njem na njem nke ngwaọrụ ndị a, nche dị na ụzọ ụgbọ oloko [More ...]
N'ihi nkwa nke enyere ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Osimiri Osmangazi, ọkụ nke onye na-agafe ọkụ. Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa na-akwụ ụgwọ ugbu a [More ...]
Kpọọ nnabata site na Accorlu Train ijeri; Ndị otu Republican (CHP), onye natara igwe okwu na mkparịta ụka mmefu ego nke 2020 nke oflọ Ọrụ Transportgbọ njem na akụrụngwa na TGNA Plan and Budget Commission, Lelee profaịlụ Ilhami zuru ezu [More ...]